Ahoana ny fomba hampianarana ny zanakao ny atao hoe faharetana | Bezzia
Ahoana ny fomba hampianarana ny zanakao hoe inona izany fahaizan-tsaina izany
Maria Jose Roldan | 15/05/2021 10:52 | Ampianaro ny ankizy
Indrisy, ny fanaintainana sy ny fijaliana dia ampahany amin'ny fiainana ary zava-dehibe ny fahalalana ny fiatrehana fotoana toy izany. Raha ny ankizy dia mety ho sarotra kokoa ny raharaha. Ny fahafatesan'ny olona akaiky na fanovana trano tsotra dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny zaza.
Izany no antony tsy maintsy ampianaran'ny ray aman-dreny ny zanany hahalala hoe inona ny faharetana ary amin'ity fomba ity hahafahany mandresy fotoana sarotra mety hananan'izy ireo mandritra ny androm-piainany.
1 Inona no atao hoe faharetana?
2 Toro lalana ho an'ny ray aman-dreny hanaraka hampianatra ny zanany hahay hatanjaka
Ny faharetana dia tsy inona fa ny fahaizan'ny olona iray, afaka matanjaka manoloana ny toe-javatra izay heverina ho sarotra sy sarotra. Ity fahaiza-manao ity dia tsy maintsy ianarana hatramin'ny fahazazany. Ny fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny dia lakile mba hahafahan'ny ankizy mianatra mahavita miovaova hatramin'ny taona voalohany. Avy eo dia holazainay aminao ny fomba tokony hiasan'ny ray aman-dreny faharetana amin'ny zanany.
Toro lalana ho an'ny ray aman-dreny hanaraka hampianatra ny zanany hahay hatanjaka
Voalohany indrindra dia tsy maintsy matoky tena ny ankizy vao afaka miatrika fanamby sasany. Tokony ho fantatry ny ankizy kely fa misy vokany ny fihetsika rehetra ary raha hitranga izany dia tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra manokana izy ireo. Ny ankizy dia tsy maintsy manandramana ary ara-dalàna fa indraindray izy ireo dia marina ary amin'ny fotoana hafa dia diso izy ireo. Ny zava-dehibe dia ny fahatsapany ny fanohanan'ny ray aman-dreniny amin'ny fotoana rehetra ary hanamafisany ny fahatokisany azy ireo.
Ny fanampiana azy ireo hanangana ny fahatokisan-tenany dia zava-dehibe amin'ny fianarana ny atao hoe mahatanty. Mahatsiaro ho ilaina ary mahay koa, Tsy isalasalana fa manampy ny zaza hiatrika ireo olana samihafa mety hitranga mandritra ny androm-piainany izany.
Singa iray hafa tsy maintsy iasan'ny ray aman-dreny amin'ny zanany ny olana momba ny fahasosorana. Tokony ho fantatry ny ankizy fa misy fotoana tsy ahatratrarana ny zavatra voalohany ary mahazatra ny manao hadisoana. Fa noho io antony io dia tsy mila sorena ianao fa mila maharitra rehefa mahazo izay tadiavinao.
Farany, zava-dehibe ny fahafantaran'ny ankizy ny atao hoe faharetana hatramin'ny fahazazany. Ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mampianatra ny zanany fa misy foana ny vahaolana amin'ny zava-drehetra ary zava-dehibe ny fitadiavana izany fomba ahafahanao ho amin'ny fomba tsara indrindra. Tsy maintsy mazava fa ny ankizy dia hijaly amin'ny fotoana samy hafa amin'ny fiainany ary ny faharetana no lakilen'ny fanampiana azy ireo handresy ireo fotoan-tsarotra sy sarotra toy izany.
Ara-dalàna ho an'ny ray aman-dreny ny manana fotoan-tsarotra tokoa rehefa mahita ny fotoan-tsarotra sy fijalian'ny zanany izy ireo, saingy zavatra ara-dalàna no tsy maintsy hitranga ka tokony hekena. Noho ny fitaovana toy ny faharetana dia antenaina fa ho afaka hiatrika ireo olana ireo ny ankizy ary fihetseham-po sy fihetseham-po amin'ny tarehy toy ny fanaintainana na alahelo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Ahoana ny fomba hampianarana ny zanakao hoe inona izany fahaizan-tsaina izany
Holatra holatra: tsaboina haingana araka izay azo atao izy ireo!